जापानी अर्बपति चन्द्रमा भ्रमणमा जान ‘जीवन साथी’ खोज्दै ! – Massive Khabar
Homeसमाचारजापानी अर्बपति चन्द्रमा भ्रमणमा जान ‘जीवन साथी’ खोज्दै !
जापानी अनलाइन कपडाको ‘रिटेलर’ जोजो इन्कका संस्थापक मेजवाले फेसनको दुनियाँमा आफ्नो भाग्य बनाएका हुन् । उनीसँग तीन बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति भएको अनुमान गरिएको छ । जसको धेरै हिस्सा उनी कला (चित्र) मा खर्च गर्छन् ।
बर्दीमा दाग लगाउने कोशिस गर्नेमाथि निर्मम कारवाही हुन्छ : महानिरीक्षक क्षेत्री